UKota Ibushi usete ukuba aphoswe yiWrestle Grand Slam; ithathe indawo ngokusesikweni yi-IWGP Heavyweight Champion yentshatsheli yomdlalo - Wwe
UKota Ibushi usete ukuba aphoswe yiWrestle Grand Slam; ithathe indawo ngokusesikweni yi-IWGP Heavyweight Champion yentshatsheli yomdlalo
U-Hiroshi Tanahashi ungene endaweni ka-Kota Ibushi ngokusesikweni kumnyhadala ophambili we-NJPW Wrestle Grand Slam kwiiyure ezimbalwa ngaphambi komboniso. Ukukhokelela kumnyhadala, u-Ibushi kwasekuqaleni wayezimisele ukucela umngeni ku-Shingo Takagi kwi-IWGP ye-World Heavyweight Championship.
Nangona kunjalo, emva nje kokuba kufunyaniswe ukuba une-pneumonia enesifiso, imeko kaKota Ibushi yeWrestle Grand Slam yayisele ibuzwa. I-NJPW igqibe kwelokuba inike ixesha ngaphambi kokwenza isigqibo esisemthethweni malunga nenqanaba leGolden Star lokukhuthaza ukubuyela eTokyo Dome.
indlela yokwenza emva kokulala nomfana
Ukuthatha i-Twitter, i-NJPW iqinisekisile ukuba uTakagi ngoku uza kuyikhusela i-IWGP yeWorldweightweight Championship ngokuchasene neTanahashi. Isibhengezo sinokubonwa ngezantsi:
Njengokuba uKota Ibushi eqhubeka nokufumana kwakhona inyumoniya, akazukubakho eWrestle Grand Slam kwiTokyo Dome.
Endaweni yakhe, emva komsitho wakhe ophambili u-Hiroshi Tanahashi uza kucela umngeni ku-Shingo Takagi ngokuhlwanje! https://t.co/lESZDkynwX #njpw #njwgs pic.twitter.com/KQWFOQRspd
-NJPW kwiHlabathi liphela (@njpwglobal) Julayi 25, 2021
Ngaphandle kokurhoxiswa komdlalo weTakagi vs Ibushi, iTanahashi ngokuqinisekileyo yeyona ndawo ifanelekileyo inokubuzwa. Kwakungekho kudala kakhulu xa i-Ace ijongene noTakagi kwaye yamoyisa ukuphumelela i-NEVER Openweight Championship emva komdlalo ogqibe ngaphezulu kwemizuzu engama-30.
Ngale nto ithethwayo, uTanahashi ngoku unethuba lokuphinda imbali kwaye athathe elinye ibhanti kwiThe Dragon.
lidinga ntoni ilizwe ngoku
I-IWGP yeHlabathi yeWavyweight Champion ijonge ukwenza iminyaka yobudala beNamba.
UHiroshi Tanahashi ubethe uShingo ngaphambili- kwaye akukho mntu ulilungeleyo elona nqanaba likhulu.
Idabi elenziwe eNew Japan kwaye liyafumaneka ngesiNgesi okanye ngesiFrentshi ngokuhlwanje @iamfanlalisa ! https://t.co/EP9XmVcP3N #njwgs @PastortheDJ @mafa_bavuma
UKota Ibushi usete ukuba alahle enye yeyona miboniso mikhulu ye-NJPW ye-2021
Ngelixa izinto zingakhange zihambe kwicala elicwangcisiweyo le-New Japan Pro Wrestling kulo nyaka, inkuthazo ibisenza konke okusemandleni ayo ukudibanisa imidlalo ekumgangatho wehlabathi phakathi kwesifo esiqhubekayo.
Emva kwawo onke amahla ndinyuka kwiinyanga ezidlulileyo, uKota Ibushi waphinda wacwangciselwa umceli mngeni kwi-IWGP yeWorldweightweight Championship. Isihloko saqala sashiywa ngu-Will Ospreay, owayezimisele ukujongana noKazuchika Okada kwisiganeko sokuqala somboniso, kodwa loo mdlalo wanyanzeliswa ukuba urhoxisiwe ngenxa yokwenzakala kuka-Ospreay.
Isihloko esingenamntu safunyanwa nguTakagi owabetha u-Okada ukuba aphumelele umtya kwaye wayecwangciselwe ukubeka ibhanti lakhe kumgca ngokuchasene noKota Ibushi. Ngelishwa iGolden Star, wanyanzelwa ukuba arhoxe emdlalweni ngomzuzu wokugqibela.
yintoni italente yam ebomini
Uyenza njani inyanga ukuba ihambe ngokukhawuleza okukhulu
yintoni umntu okhululekileyo onomoya
njani ukungancancisi ebomini
Amaqhinga e-narcissist okufumana ubuye
shawn michaels kunye kathathu h